iPhone nsogbu na-ịzụ ha jọrọ njọ isi bụla ugbu a na mgbe ahụ. Mgbe ọtụtụ n'ime anyị, o yiri ka habituated na ọtụtụ ma pụghị ịgọnahụ otú manụ ọ na-akawanye! Apple si mobile n'elu ikpo okwu àmà ọhụrụ usoro nnọọ ugboro ugboro, ma ọ bụ n'ezie ihe ijuanya otú onye ọ bụla handset nwere ya e ji mara mbipụta. N'akụkụ ụfọdụ pụtara ìhè atụmatụ, otutu ngwa ọdịnala na ole na ole Tweaks, na negatives-eme ka ọnụnọ ha ahụ. Ọ bụ ezie na anyị nwere ike ikwu na ị na-emelite gị ngwa ma ọ bụ ego maka nwetụrụ nsogbu, nke bụ eziokwu bụ mmelite enye ụzọ ọhụrụ na mgbagwoju nsogbu. Kama regretting gị zụọ ma ọ bụ na-egwu etieti maka persistent mkpọka, ọ dị mma ịmara otú i nwere ike igboro ha.
Nnọọ ka ị na-agụ reviews banyere iPhones,-anọ na-obere flaws dere ma ọ bụ ọbụna ndị na-adịghị kwuru nwere ike inye gị a siri ike oge. Depụtara n'okpuru bụ 10 isi software mbipụta nkịtị ka iPhone ọrụ, n'agbanyeghị nke ụdị.
iPhone nche mbipụta na ndị mmadụ na-eche banyere ihe ndị kasị
Ọ bụrụ na akụkọ a ga-kweere, ngwa ọdịnala na-n'iyi karịa ọbụna ha na-eji na mbụ na iPhones. Ọ bụrụ na ezughị, acha anụnụ anụnụ na ihuenyo ọnwụ (BSOD) bụghị ihe ọhụrụ mgbe ịgbanyụ na-eme. Ọ dịghị ihe nwere ike kwuru maka ụfọdụ dị ka ihe mere ihe ndị a na-ugboro ugboro ma ọ bụ otú ha ga-ofu ma mmepe na-adịgide na njikarịcha.
Ngwa ọdịnala na-egbu osisi si
Na-eto eto ihe mgbu n'ihi na n'aka! Ọrụ na-esiwanye achọta na ngwa mkpa ka a ite ke ugboro ugboro n'ihi na ha adịghị ka na-arụ ọrụ. N'ezie, ole na ole ngwa mkpa ka e wepụ kpam kpam dị ka mmepe ime otu ihe ahụ. Ka ịgbanyụ ndabere ngwa nwere ike nwee ume n'okpuru ntọala taabụ n'ihi na mma mmetụta.
Apple si retina bụ doro anya ndị kasị mma nke otutu ma na-akatọ dị ka mgbe niile bụ ugbu a. Ọ bụrụ na ndị iPhone 5s a hụrụ, ọ bụ nanị ihe 4 sentimita asatọ diagonally dị ka ụlọ ọrụ na-eche na-eme ka ngwaọrụ mfe iji rụọ ọrụ. Nke a na-abịa dị nkọ atuaha na asịrị ahụ went- a ibu ngosi bụ na kaadị.
Ole na ole iPhones hụwo ihe weird ka ịpị a isi na ọ bụla arụnyere keyboard utịp ke popup ifriizi. Kwesịrị ịdị, na-akpata mkpọchi na echiche nke ndị ọzọ igodo ma ọ bụ na-atụ aro okwu. Ole na ole ọrụ gbalịrị n'aka-ha na ya nanị na-ekwu na ịgbanyụ 'Zoom' na 'Ntọala>' Accessibility 'kpebiri ka okwu a bit. Otú ọ dị, ọ bụ naanị ruo nwa oge.
Rapaara na Apple Logo
Mgbe ọ hụrụ na ngwaọrụ gị na-rapaara na logo nke Apple, i kwesịrị ego maka ihe ọ bụla nke na mgbake mode. Ọ bụ ezie na nke a abụghị ihe nke igbe n'ihi na ị nwere ike mgbe niile ịnọgide na-ehi ụra / Ruth bọtịnụ na mgbe ahụ n'ụlọ button n'ihi na ọ dịghị ihe na-erughị 10 sekọnd ruo logo kpamkpam. N'ikpeazụ, ọ na-eme ma ọ bụrụ na ọ bụghị, mgbake mode bụ kwesịrị.
Apple tọrọ mbọ ka 'stellar oyiyi mma na n'elu-notch igwefoto na video atụmatụ'. Otú ọ dị, nsogbu ị ga si ala megapixel akụkụ, nke bụghị e ekpuchi ụfọdụ ndị kasị mma etinyekwu Dị ka ezi ụda flash, ngwa ngwa-ngagharị ma ọ bụ ndị ọzọ na software ndozi.
Purple ntigbaa on photos
Ọ pụrụ ịbụ na-akụda mmụọ ahụmahụ ma ọ bụrụ na ị na-eme na-ahụ na nke zuru okè ogbugba na-intruded site a weird-acha odo odo ìhè na dịghịkwa ebe na oge ị gbara ma ọ bụ ọ pụrụ iche utịp dị ka mma. N'ezie ị nwere ike echebe gị aka ma ọ bụ na-agbalị iche iche akụkụ, ma anyị obi abụọ.
Mmetụta mmezi isi ike
Nke a bụ karịsịa kwesiri ngosi maka 5s mbipụta na-egosipụta ọhụma calibrated sensọ na ya, karịsịa gyroscope, accelerometer na na. Nsogbu a na-anọchi edoghị ọbụna ugbu a ma na ụlọ ọrụ emewo ihe-arụsi ọrụ ike stance megide nke a.
Kpọchie ihuenyo mmetụ
Ọ bụ ihe ijuanya ma ole na ole iPhones iyi iji dobe aka-ihuenyo maka dịghị ihe mere mgbe nile. Ọfọn e nweghị mmerụ na-na-eleta ndị kacha nso Apple ụlọ ahịa ma ọ bụ na-ejighị n'aka ma ọ bụrụ na ihe ga-enwetaghachi otú ha. Ọ bụ ezie na ọnụ ọgụgụ dị nta e emetụta nsogbu a, ma gịnị na-Ohere?
Kefriza n'oge update
Yiri keyboard nsogbu, mmelite pụrụ ịbụ ezigbo ihe ịma aka iPhones. I nwere ike ịgbalị na-ejide na-ehi ụra / Ruth button dị ka tupu rue ịgbanyụ a mere na logo kpamkpam kpamkpam. Ọ bụrụ na, ọ na-adịghị kpebiri, mmelite nwere ike gbalịrị ole na ole ọzọ ugboro.
E nwere a plethora nke okwu na-emetụta ndị nkịtị ọrụ nke iPhones. Depụtara ole na ole na idozi ha bụghị ọgwụgwụ nke akụkọ, wee na-search on.
> Resource> iPhone> 10 Common iPhone Software Nsogbu